Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Jsl & Maamulka Gobolka Awdal oo Xadhiga ka jaray Dhismaha Xarunta Ciidanka Dab-demiska Boorama. - Somaliland fire Brigade
Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Jsl & Maamulka Gobolka Awdal oo Xadhiga ka jaray Dhismaha Xarunta Ciidanka Dab-demiska Boorama.
Boorama- 1 R/Awal 1442- 18 Oct 2020- Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Somaliland sareeye guuto Axmed Maxamed Sawaaxili, Badhasaabka gobolka Awdal iyo Mayorka degmada Boorama ayaa maanta xadhiga ka jaray xarunta ciidanka Dab-demiska Boorama.
Ugu horayn taliyaha ciidanka Dab-demiska oo halkaa hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay ayaa u mahadnaqay madaxda ka soo qayb gashay xafladan, waxaanuu taliyuhu sheegay in yagleelka xaruntani ay soo martay marxalado badan, maantana ay noqon doonto xarun wax badan ku soo kordhisa gobolka iyo degmada. Taliyaha ayaa dhanka kale bulshada gobolka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka markastaba, waxaa sidoo kale qurbajoogta deegaanka uga mahadnaqay sidii ay uga qayb qaateen aasaaska Dab-demiska Boorama, sidoo kalena markastaba u garab istaagaan horumarka ciidanka.
Taliyaha ayaa ku ammaanay ciidanka in dhismaha xaruntan ay fuliyeen waaxda Dhismayaasha ciidanka Dab-demiska, lagana fuliyay Miisaaniyada ciidanka Dab-demiska.
Duqa degmada Saleebaan Xasan Xaddi oo halkaa ka hadlay ayaa ciidanka Dab-demiska ku bogaadiyay furitaanka xaruntan cusub, waxaanuu dhankiisa bulsho weynta magaalada Boorama ku wacyigeliyay in ciidamada ay soo dhaweeyaan markasta oo hawlgal ay ku jiraan. Mayorka ayaa halkaa ciidanka uga ballanqaaday in ku caawin doono gaadiidka nooca yar yar.
Martisharaf kale oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Xasan Diheeye, Dr Buuxane, taliyaha ciidanka Booliska Qaybta Gobolka iyo masuuliyiin kale ayaa si isku mida u bogaadiyay furitaanka xaruntan. Dhanka ciidanka Dab-demiska waxaa waftiga taliyaha ku wehelinayay Hogaanka maaliyadda, Hogaanka hawlaha, Hogaanka Farsamada, tababarka & Wacyigelinta bulshada,Madaxa dhismayaasha Madaxa Warbaahinta iyo masuuliyiin kale.
Badhasaabka gobolka Awdal Maxamed Caalin Tiimbaro oo munaasibadaas soo xidhay ayaa ka hadlay waxtarka Dab-demisku ku soo kordhin doono gobolka, waxaanuu bogaadin u soo jeediyay Taliyaha Ciidanka Dabdemiska oo uu sheegay in hal-abuur ku soo kordhiyay dalka. Badhasaabka ayaa dhankiisa bulshada halkaa uga soo jeediyay awaamir uu ku farayo inay la shaqeeyaan ciidanka.
Dhanka kale badhasaabku wuxuu ciidanka u wareejiyay Raadyowyo ay kala xidhiidhi karaan laamaha amaanka gobolka.
Gebagabadii Badhasaabka iyo Taliyaha Ciidanka Dab-demiska ayaa si wadajira xadhiga uga jaray xarunta rasmiga ah ee ciidanka Dabdemiska Gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama.